I-Adobe, i-Twitter kunye namajelo eendaba aphambili aza kulwa neenkcukacha ezinzulu? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	6 Novemba 2019	• 0 Comments
In incwadi yam entsha Ndichaza indlela ezinzulu ezinokuthi zisetyenziswe ngayo kwiinkalo ezahlukeneyo kumajelo eendaba, kodwa nakwijelo losasazo loluntu kunye namaqonga engxoxo, kwaye ndicacisa indlela abeendaba baye babanazo zonke iindlela zokufaka iindaba ekusebenzeni kwamashumi eminyaka. Ukuba oku kukhuselwe abaninzi njengeplani, phantsi komgaqo ukuba kusoloko kukho umntu phakathi kwabo onesazela esiya kuthetha, alihoya ikhompiyutha yolwazi. Ukuba iinkampani zemithombo yeendaba kunye namaphephandaba afumana iindaba ezivela kumthombo we-1 nokuba umthombo omnye, umzekelo, i-General Dutch Press Office kaJohn de Mol, ke liqela elincinci ngaphakathi kwi-ANP ekufuneka liqaphele imisebenzi enjalo. Kwaye ngaphakathi kwiqela, ukwahlulahlula ulwazi kunokuqinisekisa ukuba bambalwa kuphela abantu ekufuneka bazi malunga namaqhinga kunye nenkohliso.
Ndihlala ndimangaliswa kakhulu kukuzithemba okukhulu kwimithombo yeendaba, ndikwakhona phakathi kwabo kuthiwa bavukile. Ukuba impendulo yakho yokuqala kumbandela weendaba usothukile okanye "uchukunyisiwe," ke awukaqapheli ngalo lonke eli xesha indlela abantu abaqhubela ngayo umthetho omtsha, ongqwabalala kunye nokusebenza kwengqondo. Abantu banesibindi sokuthetha malunga 'nokwazisa' kwaye bakholelwa kakuhle ukuba ngamanye amaxesha ukusebenza kweflegi yobuxoki kwenzekile, kodwa konke kukude kwaye ngokuqinisekileyo akwenzeki eNetherlands, kuba amaDatshi athembekile kwaye sonke sinesiphiwo abantu kuyo. Abezosasazo nezopolitiko kunye nezopolitiko ezininzi ezinobunzima kwiHague. Abantu abanjengoJeroben Pauw kunye noMatthijs van Nieuwkerk basekhona kwaye asikaboni ukuba bangabaphathi abanolwazi lokuqonda abaneengxoxo zokwenza imbonakalo yokugxeka kunye nokufumana ithuba lokufumanisa ukuba inzulu kangakanani inkohliso. . Asikakholelwa ukuba inkcaso inokulawulwa.
Ukuba, ekusebenzeni kwengqondo ukuba wonke umntu urhanela ziindaba ezingezizo, ubambe ingxoxo enobuzaza, neengcali ezinzulu kunye nemvakalelo enkulu, ke wonke umntu uya kuyikholelwa ngokuzenzekelayo. Kwaye ukuba uyaziphinda ezo ndaba kuzo zonke izikhululo zikanomathotholo, kuwo onke amaphephandaba nakuzo zonke iindaba, wonke umntu uyaqiniseka. La mandla okucenga aqiniswa sisiseko esibucayi sosasazo lolunye uhlobo losasazo, yonke le nto ithule yadityaniswa ngexesha lokusebenza kwengqondo. Bayigcina ingqalelo yoko kuthiwa kukuvuswa kodwa bagxile kwizinto ezifana ne-911, JFK, ukufika kwenyanga kunye nazo zonke iintlobo zeendaba ezindala okanye 'iindaba zokuziva'; nokugcina abo bevukile ngenene kwindlela ethe tye ngokubhekisele dlala (phantse yonke imihla) badlale ngeendaba ezingezizo ezenziwa ukuze kufezekiswe i-ajenda yezopolitiko. Zombini iindaba zosasazo kunye nezinye iindaba zikho ukugcina abantu bengazi malunga ne-'Wag the Inja '(ifilimu evela kwi-1997) yeendlela zosasazo kunye neqela le-Truman Show (ifilimu evela kwi1998) apho abantu babanjelwe khona. "Eyona ndlela ilungileyo yokulawula inkcaso kukukhokelela ngokwakho"
I-Adobe, inkampani evelisa isoftware yemifanekiso enokusetyenziswa ukulungisa iifilimu, ibhengeze usuku lwayizolo ukusebenzisana ne-Twitter kunye neNew York Times. Bafuna ukwazisa umgangatho wobunyani besiqulatho. Kwincwadi yam sele ndibhengeze ukuba le nto iyeza kwaye isenokuvakala njengenyathelo elimnandi, elinokuthetha ukuba "iifektri zeendaba zaseRussia ezingeyonyani" azisenakwenza ividiyo mbumbulu yokunceda uDonald Trump ukuba aphumelele kunyulo olulandelayo, kodwa Nabani na ophethe isitshixo salo mgangatho wobunyani unoku, ngokomgaqo, athi yonke ividiyo evela "kumthombo ovunyiweyo" uyinyani kwaye nabani na okhathazwa ukuba athi ziindaba ezingeyonyani. Ngapha koko; siya kubona iifilimu eziyinyani eziyimfuneko ngexesha elizayo ukutsala ingqalelo eyongezelelweyo kwingxaki. Singayithelekisa loo nto kancinci kunye neendawo zokuhombisa zeendaba ezingeyonyani, ezazenzelwe ukuba zikwazi ukuthi "jonga indawo ezindaba ezingezizo zikho, ke ngoko kufuneka simisele uhlobo oluthile 'lwenkonzo yenyaniso' kuFacebook kunye nasekuqinisekiseni imidiya yoluntuMsgstr ". Lo mgangatho wenene wobunyani awusayi kuba ngaphezulu koko: inkonzo kaGeorge Orwell 1984 yokuqinisekiswa kwenyani.
Ngoku ngokungathandabuzekiyo kuya kubakho iingcali ezimenywe kwakhona kwitheyibhile kaJeroben Pauw ukuchaza ukuba ilungile kwaye ifuneka kangakanani uphawu olukumgangatho olungileyo, kodwa ukuba iiarhente zeendaba eziphambili zifumana ikhowudi ebhaliweyo ukuba zivume zonke iindaba zabo ezingezizo, uyakhumbula. ayisiyiyo le nto oyifumana kwisisombululo kwaye inyani iyasomeleza inkululeko yokuvelisa iindaba ezingeyonyani.
Uludwe lwekhonkco lovimba: engadget.com
tags: Adobe, umgangatho wokwenene, umxholo, deepfakes, eziziimbalasane, eendaba, iindaba ezibuxoki, entsha, ixesha, Twitter, York
« Incwadi entsha kaMartin Vrijland 'Eyona nto siyibona ilungele ukuhanjiswa!
Igqwetha likaShot uPhilippe Schol kunye nengxelo yobuqhophololo bobuxoki uSchiphol »
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.017.587